BAAQ IYO TACSI XISBIGA UMMADDA SOOMAALIYEED. Waxaan tacsi tiiraanyo leh u diraynaa ehaladii iyo qaraabadii ay ka geeriyoodeen dadkii ku dhintay qaraxyadii galabta ka dhacay Magaalada Baydhaba. | Arlaadi
Home Blog BAAQ IYO TACSI XISBIGA UMMADDA SOOMAALIYEED. Waxaan tacsi tiiraanyo leh u diraynaa ehaladii iyo qaraabadii ay ka geeriyoodeen dadkii ku dhintay qaraxyadii galabta ka dhacay Magaalada Baydhaba.
October 13, 2018| Arlaadi Online
Qaraxiii maanta ee Baydhabo Oktoober 13/10/2018
Xisbiga Ummadda waxaa uu aad uga xunyahay qaraxii ka dhacay magaalada Baydhabo maaanta oo sabti ah Oktoober 13/2018.
Allah ha u naxriisto intiii ku dhimatay qaraxyadii ka dhacay magaalada Baydhabo. Intii ku dhaawacantayna Allah ha caaafiyo. Aamiin
Wuxuu ahaa qarax arxan daro ah oo lala beegsaday dad shacab ah oo aan waxbo galabsan. Waana arrin aad looga xumado.
Xisbiga Ummadda wuxuu ugu baaqaynaa Madaxda dowlada Federaalka inaan la siyaasadeeyn masiirka dadka Koonfur galbeed ee dhiban.
Waxaan uga digaynaa Madaxda dowlada dhexe in hantida iyo dhaqaalaha dalka lagu taageero Murashaxiin gaar ah oo laga leeyahay dano siyaasadeed. Shacabka Koonur galbeed waxay walaac xoog leh ka muujiyeen wararka sheegaya in dowladu taageerayso Murashaxiin aan ehel u ahayn qabashada talada iyo hogaaminta dadka Koonfur galbeed.
Waxaan xasuusinaynaa Madaxda in xilka ay hayaan uu yahay Amaano la isweydiin doono. Madaxda dowalda dhexe ogaada in la idiin weydiindoonaa hal qof oo nabad galyo xumo dartiisa ugu dhinta degaanada Koonfur galbeed, weliba marka aad xilka iyo Masuuliyada ugu dhibtaan siyaasiyiin aan u qalmin xilka iyo Masuuliyada.
Ugu dambeyn Xisbiga Ummadda wuxuu ugu baaqayaa dhammaan dadka Koonfur galbeed in laga wada shaqeeyo nabad galyada iyo xasiloonida deegaanka.